शिलान्यास भएको ३३ वर्षपछि बल्ल कालोपत्र हुँदै ! — Newskoseli
शिलान्यास भएको ३३ वर्षपछि बल्ल कालोपत्र हुँदै !
अत्तरिया, ३० पुस ।
शिलान्यास भएको ३३ वर्षपछि बोगटान सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बडीकेदारसम्म ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने भएको हो ।
कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका सडक कालोपत्रेका लागि बोलपत्र आह्वान भई सडक निर्माण अघि बढेको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर ईश्वर बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहजपुर–बोगटान सडक कालोपत्रे २ अर्ब ५ करोडमा ठेक्का भई निर्माण अघि बढेको छ । कालोपत्र ३० महिनाभित्र सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।
कैलालीको चुरे गाउँपालिकाभित्र पर्ने १८ किमी र डोटीको बीपी नगरदेखि बडीकेदारसम्म २८ किमी सडक कालोपत्रेका लागि निर्माण कम्पनीका कर्मचारीहरु खटिइसकेको म्यानेजर बस्नेतले बताए । सडक कालोपत्रे गर्ने क्रममा कैलाली र डोटीमा गरी झन्डै ६ हजार रुख काट्नुपर्ने अवस्था आएकाले सो प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
भारतको एक्जिम बैंकको ऋण प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारको सडक विभागले सडक कालोपत्रे गर्न लागेको निर्माण सेवाका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर बस्नेतले बताए । आर्थिक समृद्धिमा मेरुदण्ड मानिएको सो सडकले कैलालीका तत्कालीन २ र डोटीका १७ गाविसका बासिन्दालाई जोड्छ ।
सहजपुरदेखि बडीकेदार गाउँपालिका हुँदै बोगटानको सिमचौर भएर दिपायल जोड्ने उक्त सडक २०४२ सालमा शिलान्यास भएको राससले जनाएको छ ।
नेकपामा विवाद : ओली कमजोर भएपछि कार्यदल नै भंग !
ऐतिहासिक जग्गामा ‘सपिङ मल’ : सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग !
मन्त्रीले नै उक्साउँदा मन्त्री–सचिवबीच कुटाकुट !
जोमसोमै बजारमा… हिउँले ढाकिएको सडक र गाडीहरू
भारी हिमपातका कारण रोकिएका सवारी साधन
जब काटियो सञ्चारमन्त्रीकै मोबाइलको लाइन…